गर्भवती श्रीमतीको पेटमा छोरी छ भन्ने आशंकामा श्रीमानले का टे श्रीमतीको पेट – Chautari Online
गर्भवती श्रीमतीको पेटमा छोरी छ भन्ने आशंकामा श्रीमानले का टे श्रीमतीको पेट
September 21, 2020 664
काठमाडौ । समाजमा कल्पना नै गर्न नसक्ने घटना हुन्छन् । गर्भवती अवस्थामा महिलालाई थप हेरचाह र मायाको आवश्यकता हुन्छ । तर एक महिलालाई भने छैटौं पटक पनि छोरी जन्माउन लागेको भन्दै पेट का टि एको छ । भारतको उत्तरप्रदेशको बदायूं जिल्लामा एक श्रीमानले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीको पेट का टे र छोरा हो वा छोरी हो भनेर हेर्न खोजेको बताइन्छ ।
घाइते महिलालाई गम्भीर अवस्थामा दिल्लीको एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । प्रहरीले श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ । बदायूंका एसएसपी संकल्प शर्माले बीबीसी हिन्दीसँगको कुराकानीमा भने, ‘घाइते महिलाको भाइको तर्फबाट ऊजुरी आएपछि श्रीमानलाई पक्राउ गरिएको हो । तर घटनावारे थप अनुसन्धान हुँदैछ ।’
बदायू जिल्लाको सिभिल लाइन्स थाना क्षेत्रको नेकपुर मोहल्लेमा बस्ने पन्नालालले आफ्नी गर्भवती श्रीमती अनिताको पेट हँ सि याले का’टि’दि एको आरोप छ ।
अनिताको परिवार अनुसार पन्नालाल श्रीमतीको गर्भमा रहेको छैटौं सन्तान छोरा हुन् वा छोरी भनेर हेर्न चाहन्थे । पन्नालालकी श्रीमतीकी बहिनी रेखाले मिडियासँगको कुराकानीमा पन्नालालका पाँच छोरी छन् र छैटौं सन्तान पनि छोरीको रुपमा जन्मियोस् भनेर उनी चाहँदैनन् ।
रेखा भन्छिन्, ‘पन्नालालको आफ्नी श्रीमतीसँग यसबारे धेरैजसो झ ग डा भइरहन्थ्यो । उनले अनितामाथि कु ट पि ट पनि गर्ने गर्दथ्यो । शनिबार पनि उनले अनितालाई नि र्घा त कु टे र हँ’सि’या’ले ह म ला गरे ।’
अनिताका भाइ राजिवका अनुसार बरेलीमा डाक्टरको सल्लाहमा अनितालाई आइतबार दिल्ली लगिएको छ किनभने उनको स्थिती गम्भीर छ । राजिव पनि उनीसँगै छन् ।
Prevकुलमानको बहिर्गमनपछि लाइन जाने क्रम बढेको हो ?
Next‘हिउँ चितुवा’ नामले प्रसिद्ध हिमाल आरोही आङरिता शेर्पाको निधन
भोक कम गर्नुका साथै तौल घटाउन पनि मद्दत गर्ने यी चार खाना
हृदयबिधारक दृश्य : वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलामा मलेशियामा शाहीको मृत्यु भएपछि बाकसमा नेपाल आएको शव खोलेर हेर्नुपर्दा
अब दुई हजार रुपैयाँमै पीसीआर टेस्ट
छालामा यस्ता डल्ला निस्केर नराम्रो देखिएको छ ? यस्तो उपाय अपनाएर एक सातामै हटाउनु
‘हावा खाऔँ भन्दै जङ्गल लगे, मोटरसाइकलमै पछाडिबाट घाँटी रेटे’ (1269)
मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि : मनोज तिमी उठ, “छोराछोरी तिम्रो बाटो कुरेर बसेका छन्” (1142)
मलाई घरमा बोलाएर उसले शारीरिक सम्पर्क राखेर त्यसपछि… (1124)
काग तिहारको दिन यी वस्तु किन्दा मिल्छ लक्ष्मीको साथ ! राशि अनुसार के किन्ने के नकिन्ने ? (1087)
ऋणले निम्त्याएको विनाश: जसले आत्महत्या मात्र गरेनन् श्रीमतीसँगै छोरा र कुकुरको समेत हत्या गरे (1052)
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! (1043)
WHO भन्छ : अब सकियो कोरोनाको त्रा’स, पहिलो सफल परीक्षण भएको खोपले ९० प्रतिशत सु र क्षा दियो (1015)
दुई छोरा गुमाएका बुवाले भने : ‘बुहारीलाई मेरै हातले बिहे गरिदिन्छु, छाेरालाई डिप्रेशन थियाे, राँची लगेर ल्याएका थियाै’ (भिडियो) (1015)
त्यसपछि श्रीमानको टाउको प्लाष्टिकमा बोकेर जाँदै थिईन्… (987)
अब दुई हजार रुपैयाँमै पीसीआर टेस्ट (980)